मलेसियामा वेवारिसे फेला परेका तामाङको उद्दारपछि नेपाल फिर्ता! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मलेसियामा वेवारिसे फेला परेका तामाङको उद्दारपछि नेपाल फिर्ता!
मलेसिया । जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको पहलमा धादिङ्गका पेरित तामाङ्ग स्वदेश फिर्ता भएका छन् । मलेसियामा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका पेरित तामाङलाई शुक्रबार हिमालयन एअरलाइन्स मार्फत जनउद्वार केन्द्र मलेसियाको पहलमा स्वदेश फिर्ता भएका छन्। “दुर्घटनामा परि नेपाली घाइते” भनेर मलेसियाको स्थानीय प्रत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको खबर लगत्तै जनउद्वार केन्द्र मलेसियाले उनको खोजी कार्य तिब्र पारेको थियो ।
देश बिदेशबाट पनि उनलाई खोजी कार्य गरि सकुशल उद्धार गर्न जनउद्वार केन्द्र लाई विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गरेका थिए । मलेसिया पेनाङको बुकित मिर्ताजाम (BM) मा उनलाई बेवारिसे अवस्थामा(एल पि एन) नेपाली संगितमा आबद्ध रह्नु भएका नेपाली हरुले फेला पारेका थिए र उनको खान र बस्नको व्यवस्थापन पनि (एल पि एन) संस्थाले गरेको थियो ।
बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तामाङ अबैधानिक रुपमा मलेसियामा रहेको थिए ।उनलाई आवश्यक सम्पुर्ण कानुनिय प्रक्रिया पुरा गरि स्वदेश फिर्ता गराउन जनउद्वार केन्द्र मलेसियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिएको थियो।मलेसियाको पेनाङ्ग देखि राजधानी क्वालालम्पुर एअरपोर्ट सम्मको सम्पुर्ण खर्च समेत जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले गरिएको थियो।
जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका अध्यक्ष केशु थापाले पिडितलाई सेल्टल दिएर राखिएको स्थानमा पुगि बिदाई गर्नु भएको थियो। नेपाली राजदूतावास मलेसियाले पेरित तामाङ्गको यात्रा अनुमानि पत्र नि:शुल्क उपलब्ध गराएको थियो । पिडित तामाङको स्वदेश फिर्ता हुने हवाई टिकट Love penang network ले व्यवस्थापन गरेको थियो ।
थप महत्वपूर्ण भूमिका समाजसेवी सपना बस्यालले गर्नु भएको थियो । यस्तै तामाङको अस्पताल खर्च ,अस्पताल हुदा सेवा सुबिधा हरुमा सुमन तामाङले व्यवस्थापन गरेका थिए । स्वदेश फर्किएका तामाङ्गलाई’प्रवासी नेपाली एकता संजालले समाजमा पुनःस्थापना गर्ने भएको छ । यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियासिल भएर साथ समर्थन सहयोग गर्ने सम्पुर्णलाई जनउद्वार केन्द्र मलेसियाले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन ब्यक्त गरेको छ ।